Fitsipika momba ny fahadiovana sy fahadiovana inona no tsy maintsy arahin'ireo studio fanaovana tombokavatsa? | Ny fanaovana tatoazy
Fitsipika momba ny fahadiovana sy fahadiovana inona no tsy maintsy arahin'ireo studio fanaovana tombokavatsa?
Manana trano fanaovana tombokavatsa na fanaovana antsy ve ianao sa miasa amin'ny micropigmentation? Avy eo dia mila mahafantatra ny fitsipika momba ny fahadiovana ianao izay takiana isaky ny foibe mba hahazoana antoka 100% foana ny asa. Tsy misalasala izahay fa manaraka ny dingana rehetra ianao, nefa tsy maninona koa ny mahatadidy azy ireo.
Mihabetsaka ny olona mankany amin'ny foiben'ny tattoo na studio hahafahana misambotra ny fiainany na ny fahatsiarovany eo amin'ny hoditra. Saingy ho an'ny valiny ho fandokafana indrindra sy eo anelanelany ny fepetra fidiovana tsara indrindra, mila manaraka dingana vitsivitsy ny foibe mba hahafahantsika rehetra miala amin'ny fifaliana amin'ny asa vita sy amin'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Te hahafantatra azy ireo ve ianao?
1 Inona no fitsipika sy fepetra fidiovana tsy maintsy arahin'ireo studio an'ny tattoo
2 Teknika fanadiovana tokony ho fantatrao
3 Ahoana no hahalalana raha manaraka ny fenitra momba ny fahadiovana ny mpanakanto tatoazy
Inona no fitsipika sy fepetra fidiovana tsy maintsy arahin'ireo studio an'ny tattoo
Betsaka ny fepetra horaisina, fa tsy isalasalana fa tsy maintsy miantomboka amin'ireo fepetra fototra indrindra isika, dia ny fahadiovana, ary izany dia mba ho voaro hatrany ny foibe misy antsika, tsy afaka mandingana ny lalàna sy lalàna mifehy ny fahadiovana ara-pahasalamana Satria amin'ity fomba ity sy amin'ny fiheverana ny zavatra takinao rehetra fotsiny, dia hanome fiarovana bebe kokoa ho an'ny mpanjifanay rehetra izahay fa koa ho anay. Inona avy ireo fepetra takiana fototra ireo?
Ao anatin'ny fotoana iray amin'ny fiainantsika isika manasa tanana amin'ny savony sy rano dia zava-dehibe kokoa. Noho izany, koa ao amin'ny foibem-peoko na studio dia tsy mihoatra ny fototra fotsiny izany.
Aorian'ny fisasana sy amin'ny tanana madio tanteraka dia hataontsika fonon-tànana. Ireo dia hampiasaina tokana foana.
Raha sendra misy karazana ratra isika dia tokony hosaronantsika tsara izany, miaraka amin'ny fehikibo izay, raha azo atao, dia tantera-drano. Fa raha tsy azo atao izany dia tsara kokoa ny manemotra ny fivoriana.
Aorian'ny fampiasana tsirairay, ny fitaovana dia tsy maintsy mandeha amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanamorana na famonoana otrikaretina.
Tsy maintsy manampy fitaovana fiarovana toy ny écran, akanjo na zavatra hafa miaro ny artista tatoazy ianao fa ny client ihany koa.
Teknika fanadiovana tokony ho fantatrao
Rehefa avy nahita izay dingana mahazatra indrindra tsy maintsy raisintsika hampiasa tsara ny asantsika isika dia mila manantitrantitra hatrany ny fomba fanadiovanamankany Voalohany indrindra dia tsy maintsy miloka amin'ilay antsoina hoe asepsy izay mifandraika amin'ny fampiharana ny fepetra fitandremana ny fahadiovana isika, hisorohana ny zavamiaina bitika tsy hahatratra ny fiainantsika. Fa rehefa tsy fantantsika raha misy izy ireo na tsia, dia hampiasa antisepsis izahay, izay teknika fanadiovana indrindra indrindra amin'ny fitaovana rehetra, satria avy aminy ny antiseptika, izay amin'ny maha-izy azy ireo, dia hanao veloma ny zavamiaina bitika te hiditra ny fitaovana fiasana.
Ka izany rehetra izany, amin'ny fahadiovana tsara hoy isika, dia azo tazonina tsara. Aza adino ny mamono otrikaretina, fa tsy ireo fitaovana ireo ihany fa koa ny toerana iasanao (indray mandeha isan'andro farafaharatsiny) sy ny fomba hafa toy ny fanjaitra na ny fanaka ampiasainao. Raha tsy manadino ny sterilization, izay teknika iray hafa ihany koa mitahiry ny fahadiovana sy misoroka ny karazana bakteria rehetra, indrindra ny fitaovana izay manakaiky ny fonontsenan-tsiranoka. Dingana sy dingana tsy maintsy tanterahina tsara!
Ahoana no hahalalana raha manaraka ny fenitra momba ny fahadiovana ny mpanakanto tatoazy
Androany dia tsy ho sarotra ny mahita studio fanaovana tazo izay manaraka tsara ny fepetra sy ny fenitra momba ny fahadiovana. Marina fa havaozina ireo ary noho izany dia tsy maintsy mailo azy ireo ny matihanina rehetra. Fa raha mpanjifa ianao, tsara kokoa ny mitsidika ny ivon-toerana foana ary manome antoka azy io.
Azo antoka fa any no hahitanao ireo famantarana sy afisy azo antoka rehetra izay miantoka tontolo iainana mahavariana ho azy. Ny firesahana amin'ny mpanakanto tatoazy dia hanome anao filaminana. Tokony hojerenao fa ny fitaovana rehetra dia tsy maintsy atao sterilized ary azo ampiasaina, ankoatry ny fanadiovana tanana sy ny fampiasana fiarovana sahaza azy ireo sy ho antsika. Apetraho amin'ny tànana tsara foana ny tenanao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » tombokavatsa » Fitsipika momba ny fahadiovana sy fahadiovana inona no tsy maintsy arahin'ireo studio fanaovana tombokavatsa?
Tattoos Flamingo sy ny dikany